Yiyiphi i-Academy Famous Famous Academy?
I-Academy ye-Academy yayingekho isikolo esisesikweni okanye ikholeji ngendlela esiyazi ngayo. Kunoko, kwakungekho yoluntu olungacwangciswanga ngabafundi ababenomdla oqhelekileyo ekufundeni izifundo ezifana nefilosofi, izibalo kunye neenkwenkwezi. UPlato wagcina inkolelo yokuba ulwazi aluzange lube ngumphumo weengcamango zangaphakathi, kodwa kunoko, kunokufunwa ngokuqwalaselwa kwaye ngoko ke kufundiswe kwabanye.
Kwakusekelwe kule ngcamango yokuba uPlato wasungula i-Academy yakhe edumileyo.
Indawo yeSikolo sePlato
Indawo yokuhlanganiswa kwe-Academy yase-Plato ekuqaleni yayiyi-grove yomphakathi kufuphi nedolophu yasendulo yase-Athene. Umyezo wasemakhaya ube yiminye amaqela amaninzi nemisebenzi. Kwaye kwakukho ekhaya kumaqela enkolo kunye nemithi yayo yomnquma ezinikezelwe kuAthenna, unkulunkulukazi wobulumko, imfazwe kunye nemisebenzi yezandla. Kamva, loo myezo wawubizwa ngokuba yiAkademos okanye iHecademus, iqhawe lalapho emva kwe-Academy. Ekugqibeleni, intsimi yasala kubahlali baseAthene ukuba basebenzise njengendawo yokuzivocavoca. Umyezo wawujikelezwe ngobungcali, ubugcisa, kunye nemvelo njengoko kwakudla ngokukhenkcezwa ngeemifanekiso, iingcwaba, iintempile, nemithi yeminquma.
UPlato wanikela iintetho zakhe apho kwi-grove encinci apho amalungu aphezulu kunye namancinci eqela elikhethekileyo labahlakaniphileyo badibana. Kuye kwagqitywa ukuba ezi ntlanganiso kunye neemfundiso zasebenzisa iindlela ezininzi kuquka iintetho, iisemina, kunye neengxoxo, kodwa imfundiso eyimfuneko yayiza kwenziwa nguPlato ngokwakhe.
Ikhasi kwi-Academy evela kwiSikolo seMathematika kunye neStatistics University yaseSt. Andrews, iScotto ithi uCicero u dwelisa iinkokheli ze-Academy ukuya ku-265 BC njengeDemocritus, iAnaxagoras, i-Empedocles, i-Parmenides, ii-Xenophanes, i-Socrates, i-Plato, i-Speusippus, i-Xenocrates, i-Polemo , Iinqwenga, neCrantor.
Emva kwePlato: iAristotle kunye nabanye abacebisi
Ekugqibeleni, abanye abaqeqeshi bajoyina, kuquka uAristotle , owayefundisa kwi-Academy ngaphambi kokuqalisa isikolo sakhe sefilosofi eLyceum. Emva kokufa kukaPlato, ukuqhutywa kwe-Academy kwanikezelwa kuLongusi. I-Academy yayifumene nolwazi olunjalo phakathi kweengqondo eziqhubekayo ukusebenza, kunye nexesha lokuvala, malunga ne-900 leminyaka emva kokufa kukaPlato uluhlu lwabafilosofi abaziwayo kunye neengqondo ezifana neDemostritus, uSocrates , iParmenides kunye ne-Xenocrates. Enyanisweni, imbali ye-Academy yayinexesha elide kangangokuba abaphengululi bahlula ngokubanzi phakathi kwe-Old Academy (ichazwe nguPlato kunye nalabo abaphumelela ngokukhawuleza) kunye neNew Academy (eqala ngobunkokheli baseArcesilaus).
Xa uMbusi Justinian I, ongumKristu, wavala i-Academy ngo-529 AD ukuba ngumhedeni, ezisixhenxe zefilosofi zaya eGundishapur ePersia kwisimemo kunye nokukhuselwa kweNkosi yasePersi Khusrau I-Anushiravan (i-Chosroes I). Nangona iJustinian idume ngokuvalwa ngokusisigxina kwe-Academy, yayiye yabandezeleka kwangaphambili ngexesha lokuxabana nokuvalwa.
Xa uSulla ehla eAthene, i-Academy yabhujiswa. Ekugqibeleni, ngeli-18 leminyaka, abaphengululi baqalisa ukufuna izidumbu ze-Academy, kwaye yavulwa phakathi kuka-1929 no-1940 ngemali ngePanayotis Aristophron.
"I-Academy" I-Concise Oxford Companion kwi-Classical Literature. Ed. MC Howatson kunye no-Ian Chilvers. I-Oxford University Press, 1996.
"E-Athene emva kokuBala: UkuCwangcisa iSixeko esitsha kunye nokuCamngca kwaMdala", uJohn Travlos
Hesperia , Vol. 50, uNombolo 4, amaDolophu neeGrike zamaGrike: i-Symposium (ngo-Oktobha-Disemba 1981), iphepha 391-407
Iiflethi zeFilosophy ezigqwesileyo
10 I-Great Punk Rock Love Songs
Indlela yokuphucula ukubizwa kwakho
Umyalelo weshumi: Uze Ungaboni
I-plug-ins ye-VST: Yintoni abayiyo kunye nendlela yokuyisebenzisa
Imizekelo emangalisayo ye-Ocean Camouflage
Iimpawu zootitshala be-21-Century
UDemeter umfazikazi ongumGrike
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseManziloo
Izakhiwo ezi-4 ze-Vestigial kubantu
Beat Blackjack nge $ 100,000 ngonyaka
Ukufunda Iintshukumo Zentsha Abafuna Ukuyilayisha
Bacchus, uThixo waseRoma wewayini kunye noNzala
Iimbolc Rituals kunye nemikhosi
I-Amon Amarth Albums
Indlela Yokuba Ngumphandi We-Cyber
I-Perimeter kunye neFom
Imibuzo ekhawulezayo kunye neempendulo malunga neetenzi kunye nezenzi ngeesiNgesi
Udade I-Chromatids: Inkcazo kunye neMzekelo
Inyanga Yembali Yomnyama - abaMnyama abaMnyama